रामशरण महत माथि माञ्चमै आक्रमणको प्रयास
ककनी गाउँपालीका वडा नं. १ मा कांग्रेशका नेतासमेत रहेका डा. रमशरण महत माथी मञ्चमै आक्रमणको प्रयास भए पछि सुरक्षाकर्मीको सहायतामा बाहिर निकालिंदै । स्थानीयबासी समेत रहेका
गोविन्दराज जोशीको उम्मेद्वारी खारेज,
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले तनहुँ क्षेत्र नम्बर १बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका गोविन्दराज जोशीको उम्मेद्वारी खारेज गरेको छ । आयोगले शनिवार उम्मेद्वारहरुविरुद्धको उजुरीको छानविन गर्दै जोशीले निर्वाचन
सविन कुमार खड्का प्रदेश नं ३ अन्तर्गत ललितपुर क्षेत्र नं ३ (क), उम्मेदवार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईं प्रदेशसभाको उम्मेदवार हुनुभयो, तयारी के कस्तो छ ? — सवैभन्दा पहिला म
काठमाडौं महानगरप्रमुख बिद्यासुन्दर भन्छन् “राजनैतिक अस्थीरताले काम गर्न सकिएन”
काठमाडौं । कार्तिक १८ । काठमाडौं महानगरपालीकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले राजनैतिक अस्थीरताले गर्दा आफुले चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको बताएका छन् । नेचुरल बचत तथा ऋण सहकारी
नागरीक सरोकार समाज तारकेश्वरले लोकतान्त्रीक चोकमा रक्तदान गदै, रक्तदानमा सहभागी हुन तारकेश्वरबासीलाई आग्रह
काठमाडौं । कार्तिक १८ । काठमाडौंको तारकेश्वरको बिकास र्निमाण लगायतका बिषयमा सहयोग गर्न तारकेश्वर नगरपालीका १० का बुद्धिजिवीहरुको संस्था नागरीक सरोकार समाज तारकेश्वरले आगामी मंसिर २
वाम गठबन्धन घोषणापत्र: ‘घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयर’
काठमाडौँ । ‘घरघरमा बिजुली : जनजनमा शेयर’ भन्ने नाराका साथ वामपन्थी गठबन्धनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वाकांक्षी योजनाका साथ आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको छ । मुलुकलाई
एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रहरी अनुसन्धानद्वारा प्रमाणित
रिया भण्डारी काठमाडौ । गत असोज २८ गते भएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा प्रकरणमा प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रहरीको अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ । अपराध अनुसन्धान महाशाखाले
टिकट बाँडफाँडमा देखिएको असन्तुष्टिले राजपा र फोरम गठबन्धन संकटमा
जितेन्द्र जितु सप्तरी । टिकट बाँडफाँडमा देखिएको असन्तुष्टिका कारण शुरुदेखिनै आन्तरिक कलहले गाँजिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम गठबन्धन उम्मेदवारी दर्ता
१७ कार्तिक । वेईजिङ । चीनमा प्रतिलिपी अधिकार उलंघन गरेका एक हजार ६५५ वेभसाइटलाई सरकारी अधिकारीहरुले बन्द गरिदिएका छन् । प्रतिलिपी अधिकार प्रशासकहरुले दुई लाख ७४ हजार
अमेरीकाले नयाँ कर नीति ल्यायो, मध्यम परिवार र आप्रवासीहरुलाई ठुलो राहत, यस्तो छ नयाँ कर नीति
सानुबाबु सिलवाल । अमेरीका । कार्तिक १७ । अमेरिकी सभामुख पाउल रायनले भर्खरै मात्र अमेरिकाको नयाँ कर निति र कर कटौति नयाँ योजना बाहिर ल्याएका छन्
शिर्ष नेता: श्रीमती, सालो, ज्वाइँ र बुहारी चुनावी मैदानमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्ती एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले श्रीमती आरजुलाई जित सुनिश्चित हुने क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न कैलाली पुर्याएका छन्। देउवा आफू उपस्थित नभई वारेसनामा
नुवाकोटको गेर्खुटारमा बाम गठबन्धनको कोणसभा सम्पन्न, नुवाकोटलाई कम्युनिष्टको किल्ला बनाउने घोषणा
नुवाकोट । कार्तिक १६ । बामपंथी गठवन्धनको संयुक्त चुनावी कोणसभा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका १० गेर्खुटारमा आज सम्पन्न भएको छ । कोणसभालाई सम्बोधन गदै बाम गठबन्धनका नेताहरुले
१७ किलो तस्करीको सुन सहित एक युवक पक्राउ
काठमाण्डौं । कार्तिक १६ । काठमाडौंमा ८६ किलो तस्करीको सुन प्रहरीले बरामद गरेको घटना सेलाउन नपाँउदै आज लम्जुङमा १७ किलो सुन सहित एक युवक पक्राउ परेका
मौसममा आएको परिवर्तनले नुवाकोटका किसानलाई चिन्ता
नुवाकोट । कार्तिक १६। हरिराम भेटवाल । शिवपुरी नुवाकोट जिल्ला नेपालको धान्न उत्पादन हुने जिल्लाको रुपमा परिचित छ।यहाँ जिल्ला को विभिन्न स्थानमा ठुलो
दुई सातादेखि मन्त्रीकै कार्यकक्षमा ताला
काठमाडौं : मुलुकको गृह, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासनजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीका कार्यकक्षमा दुई सातादेखि ताला लाग्दै आएको छ। मुलुकका ६ वटा मुख्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि ती मन्त्रालयका
काठमाडौंको मुटु कमलादीमा गोली चल्यो, गोली चलाउने तिन भारतीय सुटर अत्याधुनीक पेस्तोल र ५१ राउण्ड गोली सहित पक्राउ, को हुन गोली हान्ने ?
काठमाण्डौं । कार्तिक १५ । काठमाडौंको मुटु पुतलीसडकमा केहि बेर अघि गोली चलेको छ । आज साँझ करीब पौने ६ बजे तिर गोली चलेको हो ।
काँग्रेसले र्निवाचन आयोगलाई बुझाएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका समानुपातीक उम्मेदवारको नाम सार्वजनीक, को को परे ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहितका नेतालाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ । यस्तै कांग्रेसले उद्योगपति विनोद
यसरी टुंगियो वाम गठबन्धनको सिट बाँडफाँट
काठमाडौं : एमाले र माओवादीबीच ६१ र ३९ प्रतिशत स्थानमा उम्मेदवारी दिने गरी चुनावी तालमेल भएको छ । १६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ३३० सदस्यीय प्रदेशसभाका लागि
रबिन थपलिया । छहरे– टोखा सडकको यो फोटो देखाएर केहि दिन देखि एउटा समुह र केहि व्यक्तिले व्यवसायनै चलाएको छ । बिहान देखि बेलुकी सम्म कहिले
सुन तस्करीसँगै सलबलाउँदै आपराधिक समूह
नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले ३ कात्तिकमा कटुवा पेस्तोल र गोलीसहित चार जनालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले रामेछाप दोरम्बा स्थायी घर भई सिनामंगल बस्ने जीवन श्रेष्ठ
माओवादी केन्द्र यसरी लाग्दैछ नारायण काजीलाई हराउन ! हुँदैछ यस्तो षडयन्त्र
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठवीच गोरखा दुई नम्बर हुन लागेको चुनावी प्रतिस्पर्धा जति रोचक देखिएको छ, माओवादी केन्द्रभित्र अर्को षडयन्त्र बुन्न थालिएको खबर छ
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र तयार, देउवाले आज घोषणापत्र सार्वजनीक गदै,यस्ता छन् मुख्य प्रतिबद्धता
१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, वार्षिक पाँच खर्ब विदेशी लगानी भित्राउने दाबी – कांग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गरेको छ । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति
नुवाकोटका दुई इन्सपेक्टरको सरुवा, को को आए नुवाकोटमा ?
काठमाडौं । कार्तिक १३ । र्निवाचन आउन एक महिनामात्र बाँकी रहंदा नुवाकोटका दुई इन्सपेक्टरको सरुवा भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत जितेन्द्र कुमार बिष्ट र
नेपाल प्रहरीको ३०२ इन्सपेक्टरको सरुवा, इन्सपेक्टरको सरुवा नियमित कार्यक्रम अनुसारनै ः प्रहरी प्रवक्ता नेउपाने
काठमाण्डौं । कार्तिक १३ । नेपाल प्रहरीले ३०२ प्रहरी निरिक्षक (इन्सपेक्टर)को सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले हिजो साँझ गरेको सरुवा सुचिमा कतिपय ठाँउमा ट्राफिक
अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको आलोचना गरेको भन्दै वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । सार्वजनिक रुपमै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध
Pages 564 : You are at page 489 of 564